कांग्रेसको चियापानमा क-कसले सहभागिता जनाए ? समग्रमा यस्तो रह्यो कार्यक्रम !
कांग्रेसको चियापानमा क-कसले सहभागिता जनाए ? समग्रमा यस्तो रह्यो कार्यक्रम !
काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालय सानेपामा चियापान गरेको छ । शुक्रबार विभिन्न दलका नेता तथा पदाधिकारीहरु कांग्रेसको चियापानमा सहभागी भएका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा गरिएको चियापानमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरु झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा लगायतका नेताहरु पुगेका थिए । चियापानका निम्तालुलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरुले स्वागत गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलगायतका कुटनीतिक नियोगका अधिकारी पनि चियापानमा पुगेका थिए ।
चियापानमा चिया, समोसा र निम्की राखिएको थियो । चियापान कार्यक्रमसँगै कांग्रेस समर्थक स्वास्थ्यकर्मीहरुले निम्तालुहरुको स्वास्थ्य जाँचसमेत गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पताल इकाइ समितिले चियापानमा आएकाहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेका हुन् ।
उनीहरुले रक्तचाप परीक्षण गर्ने, सामान्य घाउ चोटपटकको ड्रेसिङ गर्ने र औषधि दिएका थिए ।
नेपालीहरुको ठूलो पर्व दशैं,तिहार र छठपर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त चियापान कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रमभन्दा केही पछि सारिएको थियो ।
कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन गर्ने गरे पनि कांग्रेसले यसवर्ष नेता चक्रप्रसाद वास्तोलाका निधनको शोकका कारण केही दिनपछि सारेर शुक्रबार गरेको हो ।